ပျားတွေသာ မရှိတော့ရင် လူသားတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ချိန်ရောက်နိုင်တဲ့ အချက် (၈) ချက်
HomeKnowledgeပျားတွေသာ မရှိတော့ရင် လူသားတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ချိန်ရောက်နိုင်တဲ့ အချက် (၈) ချက်
ကမ္ဘာပေါ်က ပျားအရေအတွက်ဟာ တဖြည်းဖြည်း နည်းပါးလာပါတယ်။ အပင်တွေမှာ ပိုးသတ်ဆေး အလွန်အကျွံသုံးမှု၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု၊ လူသားစတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ပျားတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နည်းနည်း လာပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပျားတွေ နည်းသထက် နည်းလာမယ် ဆိုရင် လူသားတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ချိန် ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေက မှန်းဆကြပါတယ်။
1. ပျားတွေက သီးနှံပင်တွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဝတ်မှုန်ကူးသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတွေ နေ့စဉ်စားနေတဲ့ အစားအစာသုံးပုံ တစ်ပုံက ပျားတွေရဲ့ ဝတ်မှုန်ကူးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ ပါတယ်။ထောပတ်သီး၊ ပဲပိစပ်၊ သခွားသီး၊ သစ်တော်သီး၊ ကီဝီသီး၊ ချယ်ရီသီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီး စတဲ့ အသီးတွေဟာ ပျားတွေရဲ့ဝတ်မှုန်ကူးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာကြ ပါတယ်။
2. အခြားသီးနှံပင်တွေ ဝတ်မှုန်ကူးဖို့ အတွက်လည်း ပျားတွေက ကူညီပေးပါတယ်။
ဝတ်မှုန်ကူးခြင်းက အစားအစာတွေ အတွက် သာမက ကော်ဖီ၊ ဝါချည်ပင်လို အပင်တွေ အတွက်လည်း အရေးကြီးပါတယ် ။ ပျားတွေ ဝတ်မှုန်ကူးတဲ့ လူဆန်ပဲပင်၊ လေးညှင်းပင်တွေကို ကျွဲ၊ နွားတွေရဲ့ အစားအစာ အဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပျားတွေဟာ လူတွေရဲ့ အစားအစာတွေ အတွက် အရေးပါရုံသာ မက တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အစားအစာတွေ အတွက်လည်း အရေးပါ ပါတယ်။
3. ပျားတွေက ဂေဟစနစ် အတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။
ပျားတွေရှိနေတဲ့ ဂေဟစနစ်မှာ လူသားတွေဟာ ဝတ်မှုန်ကူးနေစရာ မလိုပါဘူး။ ပျားတွေသာ မရှိရင် ပန်းတွေ ပွင့်ဖို့၊ အသီးတွေ သီးဖို့ အတွက် လူသားတွေ အလုပ်များနေတော့ မှာပါ။
4. ပျားမွေးမြူရေးကနေ ဝင်ငွေများရပါတယ် ။
ပျားမွေးမြူရေးက နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ 185 သန်း နီးပါး ဝင်ငွေရကြောင်း ဗြိတိန် ပျားထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြောပါတယ်။ ဒီဝင်ငွေက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်း ရှိသေးတာပါ။ ပန်းပွင့်တဲ့ အပင်မှန်သမျှက ပျားပေါ်မှာ မူတည်နေ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပျားတွေက စီးပွားရေး အရလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
5. ပျားတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလုပ် အလုပ်ဆုံး သက်ရှိတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်သားပျားတွေက အလုပ် အလွန်လုပ်ပြီး တာဝန်တွေကို ခွဲဝေယူထား ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး ပျားတွေက ပျားအုံကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်။ Royal jelly ထုတ်လုပ်တဲ့ ပျားလည်း ရှိပါတယ်။ ပျားလပို့ တည်ဆောက်တဲ့ ပျားတွေက ပျားအုံကို တည်ဆောက်ကြပါတယ်။ အစာရှာတဲ့ပျားတွေက အစာရှာဖွေပြီး ပျားအုံမှာ စုထားကြပါတယ်။
အစောင့်ပျားတွေက တခြားပျားအုံက ပျားတွေ၊ နကျယ်ကောင်တွေ မဝင်အောင် ပျားအုံကို စောင့်ရှောက်ကြ ပါတယ်။ ဝတ်ရည်ကို ရေဓာတ်ရအောင်လို့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ရတဲ့ ပျားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပျားအုံတစ်ခုမှာ ပျားကောင်ရေ 15 ကောင်ကနေ 80000 အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ NGO, Ecocolmena Spain က ဖော်ပြပါတယ်။
6. ပျားတွေက ကမ္ဘာကြီးကို အလှဆင်ပေးတဲ့ သူတွေပါ။
ပျားတွေ မရှိတော့ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပန်းတွေလည်း မရှိနိုင်တော့ ပါဘူး။ ပျားတွေကြောင့် ပန်းတွေဟာ အရောင်စုံ၊ ပုံစံစုံ၊ ရနံ့စုံနဲ့ လှပနေတာပါ။ ပျားတွေက လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို ခံစားနိုင်ပြီး တခြားပျားတွေက ပန်းတွေကို ဝတ်မှုန်ကူးပြီးပြီလားဆိုတာကိုလည်း ခွဲခြားသိပါတယ်။
7. ပျားတွေက အရေးအပါဆုံး အင်းဆက် ပိုးမွှားတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
အပင်နဲ့ ပန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း 0.25 သန်းဟာ ပျားတွေပေါ်မှာ မူတည်နေ ပါတယ်။ ပျားတွေရဲ့ ဝတ်မှုန်ကူးခြင်း ကနေ 130 ဘီလီယံယူရို ရကြောင်း၊ ပျားတွေ မရှိရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ မှန်းဆရ ခက်ကြောင်း Dr.Mc Gavin က ပြောပါတယ်။
8. ပျားထွက်ပစ္စည်း အများအပြားကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
ပျားတွေက ပျားရည်တွေကိုပဲ ထုတ်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျားဖယောင်းက အသန့်စင်ဆုံး သဘာဝပစ္စည်း ပါပဲ။ ပျားရည်အရက်၊ ပျားဝတ်မှုန်၊ Royal jelly တွေက ပျားကနေ ရရှိတဲ့ ပျားထွက် ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပျားထွက် ပစ္စည်းတွေက အချိန်တွေ အများကြီး ကြာပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ပျားတွေ ကမ္ဘာကြီးကနေ ပျောက်ကွယ်မသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
- လာဗင်ဒါ၊ ဒေလီယာ၊ ဒေစီ၊ နေကြာပန်းပင်တွေကို ပန်းခြံလေးတွေမှာ စိုက်ပျိုးပါ။
- အပင်တွေကို ဓာတုပိုးသတ်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံ မဖြန်းဘဲ သဘာဝ ပိုးသတ်ဆေးကိုပဲ သုံးပါ။
- ပျားအုံတွေကို မဖျက်ဆီးသင့် ပါဘူး။
- ပျားတွေက ရေနစ်နေတဲ့ အခါ ပျားအုံအတွက် ရေဓာတ်တွေ ရပါတယ်။
- အော်ဂဲနစ် အပင်တွေကို စိုက်ပျိုးပါ။